Ahoana ny fomba hanodinana horonantsary amin'ny solosainao na findainao - Creativos Online | Famoronana an-tserasera
Jose Angel | | Nohavaozina tamin'ny 20/06/2018 14:43 | General, Cheats
Na manana fisie amin'ny solo-saintsika isika na manana izany amin'ny findaintsika dia indraindray diso toerana izany. Ary raha mitady ny fomba hampiodinana ilay horonan-tsary isika dia mahita fomba hafa tsy dia mazava sy tsy mazava loatra. Ny sasany manazava ny fomba fanaovana azy amin'ny finday, ny hafa amin'ny solosaina. Ny hafa dia manome anao safidy hafa amin'ny iOS na Android ary amin'ny solosaina, Windows na Mac. Ka sarotra kokoa ny miala amin'ny fikarohana mankany amin'ny vahaolana ilain'ny olona amin'ny fotoana rehetra.
Noho io olana io avy amin'ny Creativos Online dia te handamina an'ity olana ity izahay. Mifamadika karazana sehatr'asa, ka rehefa tonga amin'ity olana ity ianao, dia indray mipi-maso no hamahana izany fanontaniana izany. Ny fanamarihana ireo karazana entana ireo ho ankafizinao dia ho mora raisina amin'ny ho avy, raha tsy tadidinao ny iray amin'ireo rindranasa na endrika. Betsaka ny azo atao raha ahodina ny horonan-tsary iray, na koa ivelan'ny Internet na an-tserasera. Iza no mora kokoa?
1 Ahodino horonan-tsary amin'ny solosainao
1.1 Ao amin'ny MAC
1.2 Ao amin'ny WINDOWS
2 Ahodino horonantsary an-tserasera
3 Ahodino horonan-tsary amin'ny finday avo lenta
3.1 Fampiharana IPhone
3.2 Fampiharana Android
Ahodino horonan-tsary amin'ny solosainao
Ny programa manokana ho an'ny Mac dia tsy mitovy amin'ny an'ny Windows. Ary tsy mitovy ny programa ampiasana amin'ny sehatra roa. Samy manana ny mikasika azy ireo ary 'hafetsena'. Ho hitantsika amin'ny dingana kely tsirairay avy ny tsirairay amin'izy ireo, miaraka amin'ireo programa izay mandeha tsara nefa tsy mila tsipika, saingy sarotra kokoa izany amin'ny fanatanterahana asa sasany. Raha mila mihodina horonan-tsary misy lanjany lehibe dia ireo no safidy tsara indrindra, satria raha manandrana isika -tserasera mety hahasosotra tokoa ny fotoana laniny.
Ao amin'ny MAC
Amin'ny fampiasana mac dia hampiasa Final Cut Pro X izahay: Misafidy ny horonantsary izahay ary manafatra amin'ny fandaharam-potoana. Na amin'ny alàlan'ny safidy: rakitra> Ampidiro na amin'ny fitarihana mankany fizotry mivantana. Raha vantany vao manana ny horonantsary nampidirina izahay ary vonona miaraka amin'ny fanafarana feno-, dia mankamin'ny faritra ankavanan'ny programa isika. Ho hitantsika eo ny sary mihetsika 'tape video' antsoina hoe 'Video Inspector'.
Tsindrio ny safidy 'Transformation' ary avy eo andao mankany amin'ny 'Rotation'. Hivily hanandrana isika izao, ny kodia na miakatra. Na dia afaka manoratra ny isan'ny fironana ilaintsika aza isika. Fa mazàna dia ao amin'ny toerana mahazatra toy ny 270º, 90º, 180º ary 0º.
Ao amin'ny WINDOWS
Raha mampiasa Windows isika dia afaka mampiasa Sony Vegas: Toy ny amin'ny Final Cut, hanampy ny horonan-tsarimihetsika nolomaninay amin'ny fandaharam-potoana Sony Vegas izahay. Raha vantany vao nahavita an'io isika dia tsy maintsy mandeha any amin'ny File> Properties. Ao amin'ny fananana ny programa dia hapetratsika amin'ny lafiny hafa ny refy. Izany hoe raha ao amin'ny 1024 × 720 izy ireo dia hataontsika ao anaty 720 × 1024.
Araka izany, hitovy ny refin'ny horonan-tsary fa amin'ny fihodinana marina. Mba hamenoana izany fihodinana izany dia mankany amin'ny fizotry ny fotoana sy eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny tetikasanay izahay, sary famantarana izay antsoinay hoe 'fanamoriana na fanamorana ny hetsika'. Tsindrio ny bokotra havanana ary ny safidy 'mifanaraka amin'ny lafin'ny vokatra'. Manitsy amin'ny fihodinan'ny tanana isika na mametraka ny diplaoma isa indray. Raha vantany vao voalamina tsara amin'ny famahana ny tetikasa dia ho vonona hanondrana ilay horonantsary izahay.
Ahodino horonantsary an-tserasera
Ny programa an-tserasera dia mety tsy azo atokisana amin'ny tetikasa horonantsary mavesatra. Miankina amin'ny toetra mampiavaka ny solosaina, ny Internet ary ny tranonkala izany. Izy io dia fomba iray ampiasaina ho solon'ny programa voalaza etsy ambony, satria, raha horonan-tsary kely izy dia hamaha haingana kokoa ny lesoka ary tsy mila fahalalana lehibe ianao hanatanterahana azy.
Saingy amin'ity tranga ity, izahay dia hanampy ohatra iray izay mety hamonjy anao amin'ny fotoana rehetra. Io no antsoina hoe: Rotate Video. Tsotra ny manazava azy ary tsy mila mijanona ela isika. Araka ny hitanao amin'ny sary, na eo amin'ny tamba-jotra ilay horonantsary na raha manana izany amin'ny solosainao ianao, dia entinao fotsiny. Amin'ny alàlan'ny url na miaraka amin'ny rakitra .mov ohatra. Misafidy endrika horonan-tsary irina ianao, atoro ny lalana ahodinkodina sy ny karazana famoretana. Arakaraka ny maha avo io karazana io, ny kalitaon'ny kalitaon'ny horonan-tsary ary ny habetsaky ny habeny no alainy, ny mifanohitra amin'izay no mavesatra azy.
Ahodino horonan-tsary amin'ny finday avo lenta
Misy safidy maromaro ho an'ny iOS sy Android. Na dia ny sasany amin'ny fiarahamonina isaky ny magazay aza dia tsy manana fanamarihana tsara. Mametraka ohatra iray amin'ireo tetik'asa tsirairay, hifantoka amin'ilay iray misy kiana tsara indrindra izahay.
Rehefa apetrakao ao amin'ny App Store ny 'rotate videos' dia mora ho antsika ny manindry raha tsy mijery ny fividianana voalohany. Mitranga izany rehefa manana 'famoizam-po' isika hanitsy izany lesoka izany amin'ny lahatsarintsika. Fa diso fanantenana tamin'ilay voalohany izahay ary ... ny zavatra niainantsika dia mety hanjary hahasosotra.
Ilay rindranasa izay hatolotsika ho fangatahana mihodina horonan-tsary noho ny tsikera ataon'izy ireo sy amin'ny fampiasana izay ezahinay dia inShot - Video Editor
«App tena mora ampiasaina sy tena feno. Manoro hevitra 100% aho !!. Ny hevitry ny mpanjifa
Toy ny lojika, eny tsy maimaim-poana ireo rindranasan'ny solosaina etsy ambony, tsy ho latsa-danja ireo. Azonao atao ny manandrana azy ireo ary jereo ny fomba hahitany raha maharesy lahatra anao izy io. Saingy tsy fampiharana tokana ampiasaina amin'ny fihodinana fotsiny izy io, satria manana endrika fanovana horonantsary lehibe. Ny vidiny maharitra an'ny fampiharana dia manodidina ny € 33,00. Saingy azonao atao ny mividy endri-javatra samihafa amin'ny latsaky ny telo euro, izay hahafahanao manana fidirana voafetra. Miankina amin'izay hampiasanao azy io ary mety hamaha ny iray amin'izy ireo ianao.
Raha tsy manana solosaina ianao, na miditra amin'ny iOS sy izay anananao finday avo lenta Android hanatanterahana ny asanao rehetra, ny safidy tolo-kevitra indrindra dia ny Ahodino horonan-tsary FX. Matihanina kokoa noho ny Google Photos, na dia ho an'ny asa kely aza, na ny Google Photos aza dia afaka manome anao ny safidy. Toy ny amin'ny iOS, ity fampiharana ity dia manolotra "fividianana fampiharana".
Natao manokana hitsimbinana horonan-tsary, ary ahafahanao mihodina ireo horonan-tsary roa anananay ao amin'ny galeriana sy ireo horonan-tsary izay hosoratanay amin'izany ora marina izany. Tena mahasoa izany raha mila manoratra zavatra haingana isika ary tsy ho vitantsika ny maminavina ny fomba tsara indrindra hanoratana azy ao anatin'ny segondra vitsy monja. Ankehitriny, tsy manahy izahay, satria ny Rotate Video FX dia afaka manamboatra azy amin'ny famokarana aorian'ny famokarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ahoana ny fomba hanodinana horonantsary amin'ny solosainao na findainao
Adobe manavao ny fampiharana fanovana horonantsary ho an'ny finday